Tsy ho zakan’ny mpanjifa : hampiakatra irery ny saram-pifandraisana ny Orange | NewsMada
Tsy ho zakan’ny mpanjifa : hampiakatra irery ny saram-pifandraisana ny Orange
Tampoka ho an’ny mpanjifa! Mbola tao anatin’ny fiatrehana ny fetin’ny faran’ny taona ny rehetra no nahalala tamin’ny alalan’ny fanambarana nivoaka an-gazety, fa hisondrotra ny saram-pifandraisana ho an’ny tambajotra Orange Madagascar. Maro koa anefa ireo tsy nahalala sy tsy niomana akory, kanefa hiatra manomboka ny 14 janoary izao ny fisondrotana, raha ny voalaza ao anatin’ny fanambarana.
Fohy loatra ny fotoana nampiomanana ny mpanjifa. Tsy vitan’izay, tsy mazava ny tena anton’ny fisondrotana naroson’ity tambajotra ity. Henjana ho an’ny mpanjifa ny fisondrotrana 3 hatramin’ny 10 isan-jato, indrindra ao anatin’izao fotoana maha latsaka ambany dia ambany ny fahefa-mividin’ny tsirairay izao.
Ny tena mahagaga izay namaky ilay filazana, samy itataovan-ketra tsy mivantana avokoa ny tambajotra mitrandraka ny finday rehetra, fa tsy ny Orange Madagascar irery ihany. Hailik’izy ireo any amin’ny governemanta anefa ny anton’ny fisondrotana, na fanapaha-kevitra tampotampoka azy no hampihariny.
Soa fa misy ny safidy sy ny fahafahana miova tambajotra ho an’ny mpanjifa. Matanjaka rahateo ny fifaninanana eo amin’ny fisarihana ny mpampiasa finday, ka mazava loatra fa tsy maintsy izay tolotra mora kokoa no hironany. Tsy ahoan’ny mpanjifa izay hetra tsy mivantana alain’ny fanjakana amin’ny orinasa, fa ny tolotra mora kokoa ihany no fantany. Tsy maintsy ny Orange Madagascar ihany no ho voa amin’ny farany, rehefa handao azy tsikelikely ireo mpanjifa…